हरेक व्यक्तिका आ-आफ्नै चाहना हुन्छन्। त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय: हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु। तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस्। यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ। अर्थात राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय.....
हामी जीवनमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूलाई भेट्छौं। कसैको स्वभाव हामीलाई निकै मन पर्छ भने केहि मानिसको बानी मन पर्दैन। केहि मानिससँग पहिलो भेटमा नै निजिक हुन्छौं। केहि मानिस निकै सोझा र सरल पनि हुन्छन्। त्यस्तै, केहि मानिस अत्यन्त चलाख किसिमका हुन्छन्, जो निकै चतुर तथा समझदारीका साथ काम गर्ने गर्छन्। सुखी.....
यो साता चम्किदैछ यी ५ राशिको भाग्य
मिति २०७७ साल माघ १७ गते शनिबारदेखि २३ गते अाइतबारसम्मको राशिफल मेष कृषि एवं अन्नअनाजको व्यापारमा प्रगति हुनेछ । सवारी साधनको काममा लाभ हुनेछ । घरबाहिरको घुमघाममा सहभागी भइनेछ । आर्थिक कारोबार बढ्नाले ऋणको भार कम हुनेछ । इष्टमित्रसँग नयाँ सम्बन्ध बन्नेछ । वैदेशिक काममा फाइदा एवम् यात्राको मजा मिल्नेछ.....
यो साता चम्किदै छ यी ५ राशिको भाग्य
०७७ माघ ११ गते देखी माघ १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढिलाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष सजग रहनु.....
आफ्नै श्रीमतीको पनि यो एक ठाँउमा कहिल्यै नछुनुहोस् नत्र जीन्दगीभर..
धार्मिक शास्त्रअनुसार महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा मान्ने चलन छ । यसैले तपाईकी श्रीमती नै घरकी लक्ष्मी हुन् । मानव सभ्यताको सुरुवाती सृष्टि कर्ता नै महिला हुन् । स्त्री वर्ग अगाडी थिएन् भने मानव सभ्यता जहाँ थियो त्यहि रहन्थ्यो होला । हि न्दु धर्ममा महि लालाई ठूलो भूमिका दिइएको छ । त्यसकारण महिलाई भगावानका.....
यो साता चम्किदै छ यी ४ राशिको भाग्य, तपाईंको पनि पर्यो की ?
२०७७ साल माघ ५ गते सोमबार देखि ११ गते अाइतबारसम्म्को राशिफल मेष राशि हप्ताको मध्यमा रोजगार तथा व्यवसायमा प्रगतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। आयका नयाँ स्रोतहरू पनि सिर्जना गरिनेछ। दाजु-भाईको समर्थन रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुब रहनेछ। मेष राशिका मानिसको लागि यो.....
यी ४ राशि ‘मालामाल’ हुदैछन् आजको दिन
वि.सं.२०७७ साल माघ ०६ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी १९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा रहेकोछ सजक रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै नै सघर्ष गर्नुपर्ला । वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यावसाय भने फस्टाएर जानेछ । बिद्यामा.....
थाहा छ ? सोमवार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् यस्ता १० गुणले भरिपुर्ण !
पोखरा- मानिसको सोचाई, बानीव्यहोरा, आनीबानी उसको जन्मबाट नै विकास हुँदै जान्छ । ज्योतिषहरु भन्छन्, ‘मानिस जन्मेको दिन बार साईत गते मिति, पल र निमेषले पनि उसको भविष्य कोरिएको हुन्छ । ज्योतिष विज्ञानले पनि यिनै कुराहरुमा टेकेर भविष्यवाणी गर्न सक्दछ ।’ यसैबीच यहाँ सोमबार जन्मिएका मानिसका १० विशेषताका बारेमा.....
ज्यो. जीवन पौडेल शनि मकर राशिमा रहेको छ तथा वृहस्पति चैत्र महिनासम्म मकर राशिमा रहने छ । त्यसपछि वृहस्पति कुम्भ राशिमा रहने छ । राहु वृष राशिमा तथा केतु वृश्चिक राशिमा वर्ष भरिनै रहने देखिन्छ । यी नै ग्रहको आधारमा ६ राशि भाग्यशाली बन्दैछन् । तपाइको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ तपाइको.....
आज माघको पहिलो दिन असाध्यै शुभ छ यी ४ राशिको दिन
मेष – भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सुख सम्पति मान महत्त्वमा बढोत्तरी होला । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । बृष – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ.....